ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး. ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီး ကို ရန်ကုန်ပြည်သ
ⓘ ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး. ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီး ကို ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးဟုလည်း ခေါ်သည်။ ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးသည် ရန်ကုန်မြို့၊ လသာမြို့နယ်တွင် တည်ရှိသည်။ ရန်ကုန်ဆေး ..